अब अमेरिकाले दक्षिण एसियाप्रतिको नीति फेर्ला त ? « Drishti News
काठमाडौं, १२ माघ । अमेरिकी सत्ता फेरिएसँगै विश्वभर चासोको विषय अब अमेरिकाको नीति विश्वमा कस्तो रहला ? राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकाले दक्षिण एसियाप्रतिको नीति फेर्ला त ? यसबारे विश्वका अधिकांश एशियाली मुलुकहरुमा यसबारे चासो बढेको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प हटेसँगै अब अमेरिकाको विदेश नीति परिवर्तन हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, केही नीतिहरुलाई भने बाइडनले पनि निरन्तरता दिने बताईसकेका छन् ।
अमेरिकाले पाकिस्तानलाई यसअघि आर्थिक सहायता दिँदै आएकोमा ट्रम्पले त्यसलाई रोकिदिएका थिए । चीनसँगको बढ्दो मैत्रीसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै बाइडनले पाकिस्तानलाई उक्त सहयोग पुनः नदिन पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
दक्षिण एसियामा भारतसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध बाइडनको कार्यकालमा पनि महत्वपूर्ण रहने बुझिन्छ । चीनविरुद्धको नीति कार्यान्वयनका लागि पनि अमेरिकालाई भारतको साथ चाहिने भएकाले बाइडनले पनि भारतलाई साथै लिएर अघि बढ्न सक्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
चीन बाइडनको कार्यकालमा पनि अमेरिकाका लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्ने अनुमान छ । भारतले रुससँग हतियार खरिद गरेको लगायतका विषयमा अमेरिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आए पनि दक्षिण एसियामा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कम गर्न भारतसँग सहकार्य गर्नु बाइडनका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
दक्षिण एसिया अमेरिकाका लागि सधैँ महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विशेषगरी पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेकाले पनि यो क्षेत्र उसका लागि महत्वपूर्ण बनेको हो । अमेरिकाको ट्विन टावरमा आतंकवादी आक्रमण हुनुभन्दा पहिला आतंकवाद नियन्त्रण, सैन्य र सहयोगमा पाकिस्तान अमेरिकाको महत्वपूर्ण साझेदार मुलुक थियो । तर, त्यसयता भने अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि आतंकवादलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
यस्तै, अफगानिस्तान र तालिबानबारे लिने निर्णय भने अबको चार वर्षका लागि बाइडनको कार्यकालमा निकै महत्वपूर्ण देखिएको छ । बाइडनले यसअघि तालिबानसँग अमेरिकाले गरेको सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने बताइसकेका छन् ।
बाइडेनल राष्ट्रपति कार्यालयमा के के गरे परिवर्तन ?
बाइडनले आफ्नो छनौट अनुसार ओभाल अफिसमा राष्ट्रपतिको कार्यालय केही परिवर्तन गरेका छन् । अमेरिकाको सातौं राष्ट्रपति, एन्ड्र्यू ज्याक्सनको चित्र ओभाल कार्यालयबाट हटाइएको छ । पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एन्ड्र्यू ज्याक्सनमा आफ्नो छवि हेर्न सक्षम थिए । ज्याक्सनलाई पनि आरोप लगाइएको थियो, यद्धपी उनको विरूद्ध महाभियोग कहिल्यै ल्याइएन ।
बाइडनले आफ्नो कार्यालयमा अमेरिकी इतिहासका सबैभन्दा प्रतिष्ठित र प्रभावशाली नेताहरूको छविहरू र मूर्तिहरू स्थापना गरेका छन् ।
धेरै अमेरिकी विज्ञहरू राष्ट्रपति बाइडनले ल्याएका परिवर्तनहरूको अध्ययन गर्न खोजिरहेका छन् । ओभल अफिसको निरीक्षण गर्ने एशले विलियम्सले राष्ट्रपति बाइडनको कार्यालय भ्रमण गर्दा वासिङ्टन पोस्ट अखबारलाई भने, ‘बाइडनलाई वास्तविक अमेरिका जस्तो देखिएको अफिसमा बस्नु महत्वपूर्ण थियो र यसले देखाउँछ कि उनी कस्तो राष्ट्रपति हुन भनेर ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति बसिरहेको रुजवेल्ट डेस्कको देब्रेपट्टि एन्ड्र्यू ज्याक्सनको तस्विर दार्शनिक, वैज्ञानिक र लेखक बेन्जामिन फ्रान्कलिनको तस्वीरको ठाउँमा राखिएको छ जसलाई अमेरिकाका संस्थापकहरूमध्ये एक मानिन्छ ।
भनिन्छ कि यो परिवर्तनले विज्ञानमा राष्ट्रपति बाइडनको चासो झल्काउँछ र जो बाइडनले वैज्ञानिक विधिद्वारा कोरोना महामारीलाई परास्त गर्ने कुरा गरिरहेछन् । जो बाइडनले मार्टिन लुथर किङ्ग जूनियर र रोबर्ट एफ क्यानेडीको मूर्ति आफ्नो डेस्कको अगाडि स्थापित गरेका छन, ती दुई व्यक्ति जसले अमेरिकाको नागरिक अधिकार आन्दोलनमा पर्याप्त प्रभाव पारेका थिए । यदि तपाइँ विचार गर्नुहुन्छ भने, राष्ट्रपति चुनाव अभियानको दौरान, जो बाइडनले यी दुई नेताहरूको बारेमा धेरै पटक उल्लेख गरे ।
नागरिक अधिकारका लागि काम गरिरहेका रोजा पार्क र अब्राहम लिंकनको मूर्ति पनि कार्यालयमा सजाइएको छ । ओभल अफिसमा रहेको फायर प्लेस फायरप्लेसमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डी। रुजवेल्टको ठूलो चित्र छ, जसले अमेरिकालाई विश्वव्यापी मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धबाट उठायो ।
उनी बाहेक पूर्व राष्ट्रपति थोमस जेफरसन, जर्ज वासिङ्गटन र अब्राहम लिंकनको फोटो पनि यस कोठामा छन् । ओभल अफिस अपरेटरका अनुसार ‘विपरीत विचारका नेताहरुको तस्वीरसँगै राख्नुले विचारहरुमा विविधतालाई सम्मान गर्नु पर्ने संकेत दियो ।’
ओभल अफिसका नयाँ फोटोहरू हेरेपछि, धेरै व्यक्तिहरूले सोसल मिडियामा याद गरे कि जो बाइडनको कुर्सी पछाडिको टेबलमा मेक्सिकन–अमेरिकी मजदुर नेता सेसार चाभेजको मूर्ति र उनको परिवारका फोटोहरू रहेको छ । चाभेजले १९६० र १९७० को दशकमा खेताला मजदुरहरूको अधिकारका लागि लामो लडाई लडे ।
रिपोर्टका अनुसार बुधबार ओभल अफिसमा सुनौलो पर्दा पनि हटाइएको थियो, जुन डोनाल्ड ट्रम्पले २०१७ मा आफ्नो कार्यकालको सुरुमा स्थापना गरे । गाढा निलो कार्पेट अब कोठामा स्थापना गरिएको छ र पर्दाको रंग पनि पहिले भन्दा अलि गाढा भएको छ । वासिङ्टन पोष्ट पत्रिकाले लेख्यो कि यो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको युगमा ओभल अफिसको रंग थियो ।
ओभल अफिसबाट अमेरिकी सेनाका विभिन्न शाखाका झण्डा पनि हटाइएको छ । अब उनीसँग उनको ठाउँमा एक अमेरिकी झण्डा र राष्ट्रपति टिकट मात्र छ । बेलायतका युद्धकालका नेता सर विन्स्टन चर्चिलको विवादास्पद मूर्तिलाई पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदबाट हटाइएको छ । पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यस मूर्तिलाई हटाएपछि वचन दिएका थिए कि जब उनी ओभल अफिसमा बस्छन्, त्यो कार्यालय उनको कार्यालयमा स्थापना हुन्छ ।